Tantsaha Birmana nampangaina tamin’ny lalàna elektronika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Janoary 2019 3:47 GMT
Notorian'ny Tafika Birmana ireo tantsaha nametraka fitarainana niaraka tamin'ny Fikambanana iraisam-pirenena misahana ny asa (OIT) tamin'ny nandraofan'ny Foiben'ny fitoeram-pitaovam-piadiana tany mirefy 2000 hekitara mahery tamin'ny 3 aogositra 2008).
Nampangain'ny kapiteny Phyo Wei Lin, mpitondratenin'ny tafika, ireo voampanga ho nandefa vaovao sy zavamisy any amin'ny haino aman-jery vahiny”, hoy ny Mizzima News.
Nilaza i U Tint, iray amin'ireo voampanga fa : “Tsy fantatray izany Lalàna elektronika izany ary tsy fantatray ihany koa izany Lalàna Video izany, satria tsy mahita sarimihetsika isan'andro izahay any ambanivohitra misy anay,” ary nampiany “manana olana izahay ankehitriny ary mandositra.”
Tantsaha telo nosamborina tamin'ny 20 Oktobra 2008 no notoriana araka ny lalàna elektronika rehefa nentina tany amin'ny Lalànan'ny Tsiambaratelom-panjakana (ofisialy) ny raharaha tamin'ny voalohany. Niova izany tatỳ aoriana rehefa tsikaritry ny tafika ny maha-hevidravina ny fiampangana ny tantsaha ho “maka sary ny fanorenan'ny tafika”.
Efa ela ny Fikambanana iraisam-pirenena misahana ny asa (OIT) no nanonona an'i Myanmar ho firenena mampiasa an-terivozona sy mamono ireo mpiasa tsy mazoto.
Manakombom-bava ny endrika hetsika elektronika rehetra i Myanmar hatramin'ny nisian'ny ‘Revolisiona Jaky‘ [fr] tamin'ny herintaona (2007) izay nanoheran'ireo Moanina manerana ny firenena ny fitondrana ara-miaramila. Niely nanerana izao tontolo izao tamin'ny alàlan'ny aterineto ny hetsi-panoherana sy ny famoretana an-kerisetra taty aoriana, ka nitondra fanamelohana iraisampirenena sy fanaraha-maso goavana ny asan'ny fitondrana ara-miaramila.